टमाटर को जन्म ठाउ दक्षिण अमेरिका छ। यो बोट को xvi शताब्दीमा स्पेनिश conquistadors द्वारा युरोप ल्याइएको थियो। को Incas भाषामा "Tomatl" अर्थ "ठूलो बेरी।" Pomme d'Amour - र फ्रेंच फल को रंग र आकार को लागि, हृदय को reminiscent, प्रेम को स्याउ जो फ्रान्सेली भनिन्छ। संस्कृति को यसैले नाम - को टमाटर। सुरुमा यो बोट आनन्द र आश्चर्य घर वरिपरि गर्न गिर, एक बगैचा सजावट रूपमा प्रयोग गरिएको थियो, र यसको फल खाने को नालायक र पनि विषालु छलफल भएको थियो। को नवीनता छरछिमेकी हेर्न आए मा, कसैको आश्चर्य कुनै सीमा थियो।
मानव खपत को लागि आफ्नो उपयुक्ततामाथि जो हामी सबै योगदान गर्न राम्रो भाग्य परिभाषित। यो 1776 मा उत्तर अमेरिका को अंग्रेजी कोलोनिहरु को स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता लागि संघर्ष बीचमा भयो। विद्रोही भविष्य अमेरिकी राष्ट्रपति नेतृत्व Dzhordzh Vashington। र तिनीहरूले यो अचम्मको बोट कार्य गर्दछ, तिनीहरूलाई spiced को फल देखि बनाइएको सस द्वारा विष गर्न खोजे। वाशिंगटन उहाँले अझै पनि जीवित थियो भन्ने तथ्यलाई उल्लेख छैन, यो मन पराएका स्वाद। तर अझै पनि टमाटर पूर्वाग्रह केही समय बाँकी छ। युरोप र नयाँ विश्व मा, टमाटर थप खाने को नालायक छलफल बेला (को XVIII सताब्दी), रूस मा, दक्षिणी क्षेत्रहरु मा, यो एक बगैचा र खाना संस्कृति रूपमा, बढ्न थाले। को XIX सताब्दी को बीचमा, टमाटर को वितरण को क्षेत्र ढाकिएको छ बीचमा ब्यान्ड को क्षेत्रहरु, र शताब्दीको अन्त द्वारा - उत्तरी क्षेत्र। नयाँ, मात्र हतार तर पनि चिसो-हार्डी एक जो छ टमाटर Snowdrop को प्रजनकों समय धन्यवाद भन्दा सिर्जना तीव्र प्रसार प्राप्त प्रजातिहरू, साथ। ब्रीडर्स अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त गरेको छ, र यो अब लगभग जताततै यो संस्कृति जगाउन कि छैन अचम्मको छ।
टमाटर Snowdrop को चिसो प्रतिरोधी प्रजातिहरू मूल देश को खुला क्षेत्र उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रमा बढ्दै गर्न छाँटकाँट। घर मा खिडकी बिरुवा बढ्दै रूपमा श्रृंखला गरेको विकास र वृद्धि हटाइएको यस्तो लिंक देखि। राम्रो अन्य भन्दा किसिमहरु, टमाटर Snowdrop गरिब soils मा बढ्न र माटो नाइट्रोजन मल बनाउन समेत उत्पादकत्व कम।
टमाटर Snowdrop सामान्यतया अप्रिल मा एक ग्रीनहाउस मा छरिएको गरम छैन। (एक ग्रीनहाउस जहाँ राम्रो-manured माटो मा अप्रिल अन्त वा) मध्य-जुन उब्जाउ बिरुवा, खुला जमीन मा लगाए। चरण पूरा पकने मिड-अगस्ट लागि आवश्यक छ। टमाटर Snowdrop - polushtambovy संकुचित झाडी, जब आफ्नो स्टेम3अप earthing संग हुर्केका बारी मा सामान्यतया3ब्रश छ जो प्रत्येक मा, गठन गरिएको छ। फल सेट - जुन को दोस्रो आधा प्रारम्भिक जुलाई मा, ठूलो फूल समयमा अवलोकन छ। 90-11 ग्राम गर्न - तिनीहरूले 150 ग्राम, र दोस्रो सम्म पकाना पहिलो शाखा। सामान्यतया ब्रश5फल। प्रति बोट कुल टमाटर Snowdrop 1.6 किलोग्राम सम्म पैदावार।
र, को पाठ्यक्रम, टमाटर Snowdrop यसको औषधीय गुण को बहुमुखी आफ्नो समकक्षों फरक कुनै छ। टमाटर राम्रो antidepressant हुनुको, serotonin गर्न चयापचय र कारण सुधार मुड सुधार। शरीरमा विरोधी उमेर बढन र विरोधी ट्यूमर प्रभाव, atherosclerosis, asthenia, को आन्द्रा को विकार मा मद्दत गर्छ। एक प्राकृतिक उपाय र एक शक्तिशाली एंटीओक्सिडेंट - lycopene आफ्नो संरचना मा समावेश गरिएको छ, यो हृदय र भास्कुलर रोग को जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ। यसको सामग्री संग खाद्य पदार्थ वनस्पति तेल प्रयोग गरिएको छ जब यो तरकारी राम्रो अवशोषित छ।
अहिलेसम्म यसको लाभदायी गुण दृष्टि संरक्षण र जो बुढेसकालमा दृष्टि हानि हुन सक्छ आँखा, को रेटिना मा परिवर्तन रोक्न मद्दत। Contraindications जस्तै रोगहरु लागि अवस्थित gallstones, त्यसैले पूर्ण देखि आफ्नो आहार आवश्यक छैन बाहिर यो उपयोगी तरकारी शासन, र गैस्ट्रिक अल्सर, तर तिनीहरूले नातेदार हुन्। टमाटर खाने र स्वस्थ रहन!
कसरी आफ्नो dacha मा cuttings एक प्रकार को बेल देखि प्रोपेगेट गर्न?
Miscanthus - चिनियाँ ईख
Aphelandra: घर मा हेरविचार, महत्त्वपूर्ण पक्षहरू
तपाईंको आफ्नै हातले सुक्खा बरफ। सूत्र ड्राई बरफ
हाम्रो वरपर Schumann फ्रिक्वेन्सी
Varroa मौरीले: रोकथाम, उपचार विधि। सिकारुहरूको लागि मौरी पालन
आकर्षण Psebaya। पैदल यात्रा। क्रास्नोडार क्षेत्र
अनातोली Zarubin, जीवनी
Givenchy प्ले तीव्र: समीक्षा